1 door extend locker with individual key and air ventilation. သီးသန့်သော့နှင့် လေ၀င်ထွက်ပေါက်ပါပြီး၊ ပစ္စည်းများထည့်ကာ ဆက်၍အသုံးပြုနိုင်သည့် တံခါး (၁)ချပ်နှင့်ဗီရို။
2 door extend locker with individual key and air ventilation. သီးသန့်သော့နှင့် လေ၀င်ထွက်ပေါက်ပါပြီး၊ ပစ္စည်းများထည့်ကာ ဆက်၍အသုံးပြုနိုင်သည့် တံခါး (၂)ချပ်နှင့်ဗီရို။
3 door extend locker with individual key and air ventilation. သီးသန့်သော့နှင့် လေ၀င်ထွက်ပေါက်ပါပြီး၊ ပစ္စည်းများထည့်ကာ ဆက်၍အသုံးပြုနိုင်သည့် တံခါး (၃)ချပ်နှင့်ဗီရို။
4 door extend locker with individual key and air ventilation. သီးသန့်သော့နှင့် လေ၀င်ထွက်ပေါက်ပါပြီး၊ ပစ္စည်းများထည့်ကာ ဆက်၍အသုံးပြုနိုင်သည့် တံခါး (၄)ချပ်နှင့်ဗီရို။
6 door extend locker with individual key and air ventilation. သီးသန့်သော့နှင့် လေ၀င်ထွက်ပေါက်ပါပြီး၊ ပစ္စည်းများထည့်ကာ ဆက်၍အသုံးပြုနိုင်သည့် တံခါး (၆)ချပ်နှင့်ဗီရို။
SHOE CABINET 14 SHELVES
Shoe cabinet with 14 inclined shelves စင်အစောင်း (၁၄)ခုပါသော ဖိနပ်စင်။ size: W100*D35*H130 cm. အတိုင်းအတာ – အလျား ၁၀၀၊ အနံ ၃၅၊ အမြင့် ၁၃၀ စင်တီမီတာ Including 14 shelves(capacity upto 32pairs of shoes) ဖိနပ်တင်စင်များ (၁၄)ခုပါဝင်သည်။ (ဖိနပ်အရံ (၃၂)ရံအထက်သိမ်းထည့်နိုင်သည်။)
SAFE BOX-Horinzontal dial key
Fire resistant safe 53 kgs or 117 lbs – dial key system with shelf. ၅၃ ကီလို သို့မဟုတ် ၁၁၇ ပေါင်ရှိသော မီးခံသေတ္တာ။ စင်တစ်စင်နှင့် လှည့်နံပါတ်လုံခြုံရေးစနစ်ပါဝင်သည်။
SAFE BOX-Horinzontal digital key
Fire resistant safe 53 kgs or 117 lbs – dial key system with shelf. ၅၃ ကီလို သို့မဟုတ် ၁၁၇ ပေါင်ရှိသော မီးခံသေတ္တာ။ စင်တစ်စင်နှင့် ဒစ်ဂျစ်တယ်နံပါတ်လုံခြုံရေးစနစ်ပါဝင်သည်။
SAFE BOX-Vertical dial key
SAFE BOX-Vertical digital key
PEDESTAL2DRAWERS
Pedestal with2drawers and central lock. ဗဟိုလုံခြုံရေးသော့စနစ်ပါသော အံဆွဲ (၂)ခုနှင့်တိုင်ခုံ။ Size: W38.8*D56*H67.5 cm. အတိုင်းအတာ – အလျား ၃၈.၈၊ အနံ ၅၆၊ အမြင့် ၆၇.၅ စင်တီမီတာ
Side desk with shelf စင် (၁)စင်ပါသော ဘေးစားပွဲခုံ။ Size: W60*D60*H60.5 cm. အတိုင်းအတာ – အလျား ၆၀၊ အနံ ၆၀၊ အမြင့် ၆၀.၅ စင်တီမီတာ